द्वन्दात्मक भौतिकवाद र मार्क्सवादी दृस्टीकोणबाट संसारलाई कसरी बुज्ने ? - Kantipath.com
द्वन्दात्मक भौतिकवाद र मार्क्सवादी दृस्टीकोणबाट संसारलाई कसरी बुज्ने ?
संसारका सबै वस्तु र घटनाहरू गतिशील हुन्छ । कुनै पनि वस्तुमा रहेको द्वन्द्वात्मक गतिद्वारा नै विकास वा रूपान्तरण सम्भव हुँदैआएको छ । यो जीवन र जगतलाई बुझ्ने भौतिकवादी मान्यता हो । वस्तुमा अन्तरनिहित आन्तरिक सङ्घर्ष नै द्वन्द्व हो । यता वस्तुभित्रको विपरीत पक्षहरू बीचको एकत्व नै द्वन्द्वात्मकता हो । वस्तुको यही चरित्रको कारण परिवर्तन सम्भव हुन्छ । मानव समाजमा पनि मजदुर र मालिक साथै शासक र शासितहरूबीच अन्तरविरोध हुन्छ । दुवै पक्षबीचको सङ्घर्षपूर्ण एकत्वमा मजदुर र मालिक र शासक र शासितहरू अस्तित्वमा रहन्छन् । द्वन्द्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवादी मान्यता अनुरूप नै वस्तु वा समाजको विकास र रूपान्तरण हुँदै आएको छ । यो ऐतिहासिक रूपमा निरन्तर विकास भइरहने निरन्तर प्रक्रिया हो । यही भौतिकवादी प्रस्थापना अनुरूप संसारमा तानाशाही शासनहरू ढलेको छ भने जनताको न्यायपूर्ण राज्य व्यवस्थाहरू स्थापना भएको छ !
Previous Previous post: काठमाडाैंबाट नेकपा ‘विप्लव’ समूहका मेचिनगर इन्चार्ज पक्राउ
Next Next post: बाँदर र सुँगुरलाई मिलाएर चीनका वैज्ञानिकले बनाए नयाँ प्रजाति, स्थानियहरू अचम्मित